Fintonana Sri Lanka ~ Journey-Assist - Ny tena mahaliana
Pejy fandraisana » Eran-tany / Faritra » Asia » Sri Lanka » Fampahavian'i Sri Lanka
Fampahavian'i Sri Lanka
Tempolin'ny Gua Dambula
Ity dia lava-bato lava-bato iray nalaina tao anaty vatolampy tokony ho 300 metatra ny halavany ary misy lava-bato 5 mifandray ao anatiny. Taorian'ny nidirany tao amin'ny efitrano lehibe, dia azo atao ny mahita sary sokitra lehibe an'i Bouddha sy olo-malaza maro hafa. Amin'ny zohy hafa amin'ny tempoly, dia afaka hahita ianao hoe miakatra mivantana amin'ny rindrina ny rano avy amin'ny loharano iray eo an-toerana. Ny taonan'ity tempoly ity (antsoina koa hoe volamena) dia efa mihoatra ny 2 taona, ary ny tsangambato ao amin'io dia mamorona iray amin'ireo fanangonana miavaka indrindra amin'ny sary sokitra Buddha.
Fampahalalana mifandray. Vidin-javatra. Fomba fandidiana
Ao amin'ny fonenan'i Sri Lanka, akaikin'ny tanànan'i Dambulla, ny tempoliny
Ny vidin'ny tapakila fidirana dia 1500 Rupiah.
Ora fanokafana: 7.00-19.00
telefaonina: + 94 662 283 605
Sariho ny sarintany ho an'ny fanamoriana - https://goo.gl/maps/9RQQaEnXCpU5VX5V8
(Antsipirihany momba ny tempolin'i goavan'i Dambulla IZANY
Temple Cave of Aluvihara. Tempolin'ny Cave Aluvihara
Ny tranobe dia ahitana lava-bato maromaro izay ahafahanao mahita sary sy sary sokitra mahavariana any amin'ny helo, ary sarivongana lehibe iray ao amin'i Buddha fampahatsiarovana indray, saribakitra mahagaga eo amin'ny rindrina sy ny maro hafa.
Ny vidiny sy ny fampahalalana mifandray
Ny vidin'ny fitsidihana ny tempoly dia 250 rupte
(Amin'ny alàlan'ny fijerena amin'ny antsipirian'ny tempolin'i gua Aluvihara miaraka amin'ny sary sy ny famaritana, azonao atao ny mianatra eto)
Iray amin'ireo zava-dehibe lehibe indrindra any Sri Lankan dia ny Tooth of Buddha, nitazona tao amin'ny tempoly iray tao an-tanànan'i Kandy. Io nify io dia nentina tany amin'ny nosy tao anaty 4 sotrokely. n. f. avy any India. Nomena fananana mahagaga izy. Betsaka ny marary no nanandrana nanimba ny nify, tsy nankasitrahana Bouddha. Tsy tanteraka anefa ireo drafitra rehetra ireo dia tafavoaka ny nify. Any amoron'ny farihy mahafinaritra no misy ny tempoly. Tena voaravaka io. Imbetsaka isan'andro, ny masira masina dia aseho amin'ny mpanao paroasy.
Fandaharana: 5.30-20.00. isan'andro
Ny vidin'ny fitsidihana - 1500 rupees
Adiresy: Sri Dalada Veediya, Kandy 20000, Sri Lanka
Phone: + 94 812 234 226
Ampitoo amin'ny sarintany ny navigations - https://g.page/sridaladamaligawa?share
(Antsipirian'ny antsipirihany momba ny Tempolin'i Bhotta HERE)
Ity fisintonana voajanahary ity dia hita ao afovoan-tanàna ary iray amin'ireo toerana fanaovana dihy malaza indrindra. Sigiriya dia fantatra koa amin'ny hoe "Rock Rock". Izy io dia tena hantsana avo amin'ny toerana misy volkano efa lany tamingana. Nisy takelaka iray noforonina avy amin'ny lava-dranomandry, ary nisy lapa iray naorina teo aminy tamin'ny fiandohan'ny vanim-potoana. Ny sisa tavela amin'ity trano mimanda ity dia mbola velona mandraka ankehitriny, fa na dia ny fahalehibeazana teo amin'ity trano ity aza dia hita avy amin'izy ireo. Ny fidirana amin'ny lapa dia tamin'ny liona voalohany, izay nisy ny liona lehibe, izay nivoahan'ny anaran'io vatolampy io, na izany aza ankehitriny dia ny sisa amin'ity biby ity ihany no mijanona.
Ora fanokafana: 7.00-16.00. isan'andro
Ny vidin'ny fitsidihana - 5520 rupees (30dol)
Sariho ny sarintany ho an'ny fanamoriana - https://goo.gl/maps/1cJbxgfAu7LbxhiC6
(Famerenana amin'ny antsipiriany an'i Sigiriya miaraka amin'ny sary sy fampahalalana mahasoa eto)
(Famerenana amin'ny antsipirihany ny Pidurangaly, sary, famaritana, vidiny, toetr'andro, hotely akaikin'ny trano.
Tendrombohitra masina izy io, fitsangatsanganana izay tena malaza amin'ny mpizahatany any Sri Lanka. Ny haavon'ny toerana ara-kolotsaina dia 2243 m. Ny solontenan'ny finoana 4 dia manao fivahiniana masina eto, anisan'izany ny kristianina. Ity ambany ity ny sarivongan'i Buddha, avy eo hiakatra ny tendrombohitra tsy maintsy handresena lalana somary sarotra ianao, ary misy ny dingana 5200 4 eo ho eo. Raha ny salanisa, maharitra XNUMX ora ny fiakarana azy. Raha manomboka miakatra amin'ny fiandohan'ny alina ianao, eny amin'ny farany dia hihaona amin'ny maraina ianao. Na eo an-tampon'ny tendrombohitra aza, dia misy sisa ny tongotra iray, izay, araka ny angano, navelan'ny Buddha mihitsy.
Maimaimpoana ny fidirana, saingy eo am-piandohan'ny fiakarana dia hasaina hanolotra fanomezana ianao. Manao izany rehetra izany izy ireo, fa ho an'ny isan-karazany.
Sariho ny sarintany ho an'ny fanamoriana - https://goo.gl/maps/WYFHBPKLz6nqs8g68
(Ny antsipirian'ny antsipirihany momba ny tampon'i Adama. Ascent. Descent. Tantara, ary koa ny sary sy ny antsipiriany azo alaina eto)
(Famerenana amin'ny antsipirihany momba ny Von-jaza Kely an'i Adama miaraka amin'ny sary, toetr'andro, hotely misy azy ankehitriny)
Ity zaridaina ity dia hita any atsimoatsinanan'i Sri Lanka. Fantatra amin'ny karazam-borona maro mipetraka eto. Manodidina ny 250 amin'izy ireo no misy amin'izy ireo, misy ny farihy sy ny honahona, ary koa ny mponin'ny tany. Betsaka ny biby mandady sy biby mampinono any Kuman (ny ankamaroany dia ilay elefanta Sri Lankan). Ny ala sy ny farihy dia voahodidina alaala. Raha tianao dia afaka mandany andro maromaro ao Kuman ianao. Indrindra ho an'io dia misy toby iray.
Ora fanokafana: 6.00-18.00. isan'andro
Adiresy: Lalan'i Panama-Kumbukkana, Kumana National Park, Panama 32508, Sri Lanka
telefaonina: + 94 77 347 6288
Tranonkalan'ny kianja: http://kumananationalpark.com/
Ny vidin'ny fitsidihana ny safidin'ny zaridainan'ny zaridaina sy ny fijanonana iray alina manomboka amin'ny $ 105. (amin'ny antsipiriany)
Sariho ny sarintany ho an'ny fanamoriana - https://goo.gl/maps/GPdPBbnhDgfiVzsy8
Sri Lanka dia manana tahiry 12 natiora. Iray amin'ireo tena manana ny maha izy azy ny Yala. Io no valan-javaboary taloha indrindra ao Sri Lanka. Raha ny voalazan'ilay faritra dia tokony ho toerana izy io (2 sq.km)
Any amin'ny lemaka manarona no misy ny tany maina sy ny etona kely. Ny mpitsidika ihany no mahazo mankany amin'ny ilany andrefan'ny Yala Park, ary ny mpahay siansa dia miasa amin'ny lafiny atsinanana.
Io valan-javaboary io dia misy karazam-borona 200 mahery, ary koa karazan-biby mampinono miisa 44 izay ny ankamaroany dia mitovy amin'ny elefanta Sri Lankanina.
Ao amin'ny atsimon'ny nosy amin'ny faritany Uva
Fidirana amin'ny zaridaina ho an'ny olon-dehibe 15 $
Ho an'ny ankizy - $ 8
Safari (antsasaky ny andro) - 35 dolara
Safari (andro manontolo) - $ 60
Ora fanokafana: isan'andro manomboka amin'ny 7.00 ka hatramin'ny 18.00
Sariho ny sarintany ho an'ny fanamoriana: https://goo.gl/maps/wr5gCYo8qguXbokY6
Valan-javaboary. nosy voromailala
Ny nosy Pigeon dia nahazo sata fitahirizana tamin'ny taona 1970. Tamin'ny taona 2003, nahazo sata vaovao izy - zaridainam-pirenena. Ekena fa io nosy io dia lasa foiben'ny birao taloha, izay nampiasain'ny voromailala (izay niavian'ny anaran'ilay nosy).
Ny faritry ny zaridaina dia ahitana nosy lehibe sy kely. Ny velarantany dia 430 ha. Pigeon Island dia voahodidin'ny corals izay misy karazany 100 eo ho eo. Karazan-trondro 300 sy biby tsy manam-paharoa toy ny sokatra oliva sy sokatra no mipetraka any anaty rano akaikin'ny moron-dranomasina.
Ny mpitsidika ny zaridaina dia afaka milomano ao amin'ny ranomasina, snorkel, scuba diuba. Androany izao, miditra amin'ny nosy amin'ny sambo tsy miankina ny mpizahatany, fa tsy ho ela dia ny fikambanan'ny departemanta wildlife fiarovana Sri Lankan dia hanomboka ny sambok'izy ireo amin'ity lalana ity mba hanomezana tolotra tsara sy azo antoka kokoa ho an'ireo mpitsidika.
Eo akaikin'ny Trincomalee.
Phone: + 94 71 322 7050
Ampianaro ny sarintany ho an'ny fanamoriana (Nosy) - https://goo.gl/maps/rUVVo65Aqgt8dmmF6
Ampianaro ny sarintany ho an'ny fanamoriana (biraon'ny varotra No. 1) - https://goo.gl/maps/JNMKuvBYFQAtLG6R7
Ampianaro ny sarintany ho an'ny fanamoriana (biraon'ny varotra No. 2) - https://goo.gl/maps/h8iSKgd5YoNv6kVB6
Seranan-tsambo any Colombo
Ny renivohitr'i Colombo dia hita ao amin'ny morontsiraka andrefan'ny Sri Lanka ary izy no tanàna be mponina indrindra amin'ity nosy ity. Ny tena mahaliana dia ny seranan-tsambo izay hita eto, ny lehibe sy antitra indrindra any Azia Atsimo. Nisy seranana ara-barotra niseho teto 2 taona lasa izay. Ankoatr'izay, Colombo dia manana base base Navy lehibe indrindra any Sri Lanka.
World Trade Center any Colombo
Ao amin'ny tanàn-dehibe lehibe indrindra ao Colombo, ny olona rehetra dia manana fotoana be ahafahana miantsena mahomby.
Eto ianao dia afaka mividy vokatra, souvenir, takelaka ary entana maro hafa lafo vidy miaraka amin'ny vidiny mora.
Ny World Trade Center any Colombo no trano avo indrindra any Sri Lanka. Ny haavon'ireo tranobeny dia 152 m. Ny isan'omby dia 43. Ny faritry anatiny dia 70.
Mifanaraka amin'ny fenitra iraisam-pirenena maoderina rehetra ny fananganana. Raha ny marina dia sarotra be io izay ahitana trano 2 sy tokana mampifandray azy ireo. Ity toeram-pivarotana ity dia manana birao, fivarotana, hotely ary trano fisakafoanana. Fa mbola mihoatra ny ivon-toerana fandraharahana.
Address: 1 Bankin'ny Ceylon Mawatha, Colombo, Sri Lanka
telefaonina: + 94 112 346 333
Ora fiasana: XNUMX ora isan'andro ary fito andro isan-kerinandro.
Sariho ny sarintany ho an'ny fanamoriana - https://goo.gl/maps/mhvSnKT8N2R4q8eE6
Tena mahasarika olona izany. Taloha, St. Clair no lehibe indrindra amin'ny riandrano Sri Lankan rehetra, saingy taorian'ny fisokafan'ny tobin-jiro an'ny herinaratra, dia nihena be ny haavon'ny rano eto.
Na izany aza, mbola mitoetra ho manan-danja tokoa ny sakan'ny riandrano cascade, mahatratra 50 m. Ary ny haavon'ny haavony dia 80 m.
Ny riandrano dia mikoriana amin'ny fambolena dite, mizara ho ampahany lehibe sy kely. Rehefa midina avy amin'ny làlan'ny fizahan-tany lehibe mankany amin'ny toeram-pambolena, dia hita tokoa ny renirano mikoriana tsara tarehy.
Adiresy: a7 Tawalantenne - Talawakele Rd, Talawakelle, Sri Lanka
Phone: + 94 72 796 9883
Sariho ny sarintany ho an'ny fanamoriana - https://goo.gl/maps/4Jxch8GqLXCo6gfm7
Ravana dia nianjera
Ny fotoana tsara indrindra hitsidihana an'io fisintonana voajanahary io (toy ny riandrano hafa any Sri Lanka) dia ny vanim-potoana monsoon, satria amin'izany fotoana izany ny riandrano dia feno fika.
Na dia betsaka aza ny riandrano any Sri Lanka, ny haavon'ny avo indrindra mahatratra 270 m, ny riandranon'i Ravana kely misy haavo 25 m dia malaza indrindra amin'ny mpizahatany.
Ny angano iray izay mahaliana dia mifandraika amin'izany, izay milaza fa eo ambanin'ny rano mihintsana dia misy vilany volamena miafina izay mitsingevana amin'ny tany indraindray rehefa mihena ny rano.
Adiresy: Colombo - Galle - Hambantota - Wellawaya Rd, Ella 90900, Sri Lanka
Tranonkala - visituva.com
Tondroo amin'ny sarintany, azafady - https://g.page/ravana-falls-ella?share
Zavamaniry Elefanta Pinnaval
Noho ny toe-draharaha mikorontana ara-politika sy ny ady an-trano nandritra ny taona maro teto amin'ny firenena dia nijaly koa ny natiora. Noho ny fankahalana sy ny mosary, dia mihena ny isan'ny elefanta.
Ny olom-pirenena mahatsiaro tena dia namonjy ny ain'ireo biby mampinono lehibe ireo, ka nametraka tamin'ny 1975 ho fialofana manokana ho an'ireo elefanta ao amin'ny tanàna Pinnavala. Ireo elefanta kely tsy navelany reny, ary koa ireo elefanta olon-dehibe naratra vokatry ny fipoahana sy ny asan'ny pointer, no nentina niditra tao.
Ny trano fialofana any Pinnaval dia iray amin'ireo toerana mahasarika indrindra ao amin'ny firenena. Betsaka ny mpitsidika tonga eto izay liana amin'ny fikarakarana elefanta. Ny olona rehetra dia afaka mandray anjara manokana amin'izany.
Any amin'ny 70km no misy an'i Kandy ny masera. Mihodina ny lalana, ary azo afenina ao mandritra ny 2 ora ity halavirana ity.
telefaonina: + 94 352 265 284
Ora fanokafana: 8.30-17.30. isan'andro
Sariho ny sarintany ho an'ny fanamoriana - https://goo.gl/maps/gi9SEthUNuDrkvi69
Ny vidin'ny Elephant Shelter:
Fidirana ho an'ny olon-dehibe - 2500 rupees
Fidirana ho an'ny ankizy - 1250 rupees
Famahanana elefanta - 250 rupees
Fitsidihan'ny zana-jaza (faharetana - 4 ora) - 6000 rupe ho an'ny olon-dehibe.
Fitsidihan'ny zana-jaza (faharetany - 4 ora) - 3000 ho an'ny ankizy.
(Misy ny antsipiriany momba ny masera, miaraka amin'ny vidiny, fandaharam-potoana ary sary eto)
Pinnawala Zoo. Pinnawala Zoo
Ao amin'ny tanànan'i Pinnavala dia misy zavatra iray hafa mahaliana izay niseho tato ho ato - tamin'ny 2015. Io dia vala iray izay nijanona misokatra ny aviavy.
Ny maha-eo akaikin'ny fialofana elefanta malaza indrindra dia namela ny zoo ao Pinnawala ho lasa malaza.
Ho an'ny biby dia omena eto izay manakaiky ny voajanahary. Afaka mandeha malalaka amin'ny alàlan'ny faritany midadasika izy ireo, izay faritra hektara maro. Na izany aza, ny zoo dia manome fiarovana avo indrindra ho an'ny mpitsidika.
Adiresy: Lalana Karandupana-Rambukkana, Hiriwadunna
Telefaonina: +94 352 266 641
Ora fanokafana: 8.30-17.00. isan'andro
Sariho ny sarintany ho an'ny fanamoriana - https://goo.gl/maps/MPE7tuc8AXvZJovc7
Io no zaridaina botanika lehibe indrindra any Sri Lanka. Avy tamin'ny taonjato faha-18 no niandohany ary hitrandraka 60 hektara, izay maniry zavamaniry be dia be, izay tsy hita taratra amin'ny zavaboary. Amin'ny fitambarany, karazana zavamaniry maherin'ny 4 no voangona eto - hazo, zavamaniry ary voninkazo, izay ambaran'ny famantarana ny vaovao.
Eo amin'ny fidirana, ny kisarisary zaridaina dia voasarika hahitana ny toerana misy ireo sanganasa. Ny fitsangatsanganana amin'ny zaridainan'ny Royal Botanic dia toa ny mitsidika tany paradisa manitra. Izany dia ahafahanao mifankahalalana amin'ny tantaran'ny zaridaina sy ny toetrany eo an-toerana.
telefaonina: + 94 812 388 088
Ora fanokafana: 8.00-17.30. isan'andro
Ny vidin'ny fitsidihana - 2000 rupees
Sariho ny sarintany ho an'ny fanamoriana: https://goo.gl/maps/MHLgechQejrXEML66
(Famerenana amin'ny antsipirihany ny zaridaina Botanic Royal Peradeniya miaraka amina sary marobe - Eto)
Indray mandeha izay tao amin'ny faritany misy ny fambolena dite Nuwara dia nisy ny ala ala. Saingy raha vao nahitan'ny Anglisy fa misy toe-javatra mety amin'ny fambolena dite. Nentin'izy ireo tany amin'io faritra io ireo kirihitra voalohany. Ary nandritra ny taonjato maro dia nanara-maso akaiky ny teknolojia nentim-paharazana amin'ny famokarana dite avo lenta izy ireo.
Ireo mpitari-dalana dia hampiseho aminao ny tena fambolena sy ny orinasa izay ahafahanao mijery ny dingana rehetra amin'ny fanamboarana dite feno.
Misy ihany koa ny tranombakoka izay ahafahanao mianatra betsaka momba ny karazany dite isan-karazany, ary ny fivarotana iray mivarotra ny karazany rehetra nambolena tamin'ireny fambolena ireny.
Sarintany ho an'ny fanamoriana - https://goo.gl/maps/N7S1zdjGzvbiMjm68
Ity toerana mampientanentana ity dia any amin'ny 100 km miala any renivohitr'i Sri Lanka, Colombo. Ao an-dohasaha dia tanàna tranainy iray, antsoina koa hoe Kandy. Indray mandeha izy dia renivohitry ny fanjakana kely nisy izay tao amin'ny nosy. Tany amin'ny faritra afovoan'ny Lohasahan'i Kandy, noforonina ny kafe iray, ao afovoany izay misy lapa taloha miorina amin'ny nosy iray. Ny fitsangatsanganana dia ahafahanao mahatsapa ny hakanton'ny lemaka voajanahary. Betsaka ny lalana mitsangantsangana mahaliana amin'ny manodidina.
Izy io no tohodrano avo indrindra ao Sri Lanka, ny fananganana izay nanomboka tamin'ny 1978. Victoria Dam dia eo amoron'ny renirano Mahaweli. Natao hanomezana rano ny faritra tsy lavitra izy io ary hanomezana herinaratra azy. Tamin'ny taona 1985 dia vita ny fananganana.
Ny haavon'ilay tohodrano dia misy haavony 122 m. Misaotra azy io fa nisy tohatra lehibe iray niforona teto. Afaka mijery ny riandrano mahery vaika ianao, izay eo an-tampon'ny tohodrano Victoria. Ny rafitra iray automatique dia manome fisokafana tsy tapaka mandritra ny fotoana ahatratraran'ny rano ny fantson-drano.
Fampahalalana mifandray. vidin'ny
Fidirana amin'ny zotra fitandremana miaraka amin'ny fijerena tohodrano dia maimaimpoana.
Voarara ny fidirana amin'ny tohodrano.
Adiresy: aweli Ganga, Sri Lanka
telefaona: +94 815 673 300
Sariho ny sarintany ho an'ny fanamoriana - https://goo.gl/maps/u51aAenHtdauwtwFA
Izy io dia marika ara-tantara sy maritrano ara-maritrano malaza, izay hita ao amin'ny tanànan'i Galle, atsimon'ny Nosy, ary izy no fiarovana lehibe indrindra any Azia atsimo sy Atsinanana. Ny fananganana tany am-boalohany dia naorin'ny Portiogey tamin'ny faran'ny taonjato faha-16, fa taty aoriana dia azon'ny Holandey nidina ilay fiarovana, ary saika nanangana azy io tanteraka. Nanomboka tamin'io fotoana io, efa ho 200 taona eo ho eo no seranan-tsambo lehibe indrindra ao Sri Lanka. Ankehitriny, manodidina ny tanàna holandey ao Galle dia nitombo faritra fizahan-tany misy toeram-pivarotana, trano fisakafoanana, ary trano fisakafoanana. Na izany aza dia milamina hatrany ny toe-draharaha eto, ka ity faritra ity dia mety ho an-tongotra miendrika sy milamina.
Sarintany ho an'ny fanamoriana - https://goo.gl/maps/5t4kxdPKtdDaECa4A
Ny tanànan'ny Anuradhapura no tena manintona tantara lehibe an'i Sri Lankais. Izy io dia renivohitry ny fanjakana taloha Sinhala. Nandritra ny fotoana kelikely dia niroborobo ny tanàna, fa norobain'ny mpandresy. Tamin'ny taona 1980 dia nanomboka haverina amin'ny laoniny ny tazomoka taloha. Anuradhapura dia notsidihin'ny mpivahiny bodista bodista izay liana amin'i Isurumuniya - tempoly noforonina mivantana tao anaty lava-bato tao anatin'ny sotrokely 3. BC. f. Saingy, ny mpizahatany izay lavitra ny Buddhism dia afaka mahita zavatra mahaliana ho an'ny tenany ihany koa: sary sokitra, stupa, dobo sy lapa.
Sarintany ho an'ny fanamoriana - https://goo.gl/maps/DE4Pp3a49EA15BTdA
(Ny antsipiriany amin'ny antsipiriany momba ny tanànan'ny Anuradhapura)
200 km miala any Colombo no misy azy io. Ny renivohitry ny medievalivaratra, dia renivohitr'i Sri Lanka ity tanàna ity, ary tamin'ny 2 sotrokely no nipetraka voalohany. BC. f. Ny tsangambato momba ny maritrano momba ny Polonnaruwa dia Gal Vihara. Ity dia tempoly iray ahitana sarivongavan'i Buddha lehibe 4 izay voasokitra avy amin'ny vatolampy. Eto ianao dia afaka mahita ny Lapan'i Pakakrambahu, izay nampiditra ny fonenan'ny mpanjaka. Ankehitriny rava 3 sisa tavela no sisa tavela aminy. Na any Polonnaruwa misy stupas maromaro aza, ny Rankotvihara no lehibe indrindra aminy. Ity no stupa ambony indrindra faha-4 ambony ao Sri Lanka.
Sarintany ho an'ny fanamoriana - https://goo.gl/maps/BqhRz4UFtooqKV7Q8
Vidiny $ 25 olon-dehibe. 12.5 $ Ankizy. 4500 rupe ary 2250 rupees, tsirairay avy.
(Famerenana amin'ny antsipiriany miaraka amin'ny sary sy ny famaritana ny atahorana rehetra, ary koa ny vidiny ary fampahalalana mahasoa hafa momba an'i Polonnaruwa - Eto)
Ny foiben'ny Buddhism - Mihintale
10 km miala Anuradhapura, misy toerana iray hafa ara-tantara - ny tandavan-tendrombohitra Mihintale, izay ifantohan'ny rafi-piainana Bodista taloha, mazava kokoa, ireo sisa tavela aminy. Mba hiakaranao, mila mandresy mihoatra ny 2 000 dingana ianao.
Eo an-tampony dia misy zavatra maritrano marobe izay ahitana mason-tsivana lehibe izay nisy. Ireto avy ny stupas, sary sokitra Buddha, efitrano fitehirizam-bokatra sy fiantrana, tranom-bakoka, lava-bato, monasitera.
Ny fitsangatsanganana amin'ny havoana ao Mihintale dia ahafahanao mandentika ao anaty rivo-piainana amin'ny tony sy ny fahalehibiazana.
Sariho ny sarintany ho an'ny fanamoriana - https://goo.gl/maps/Xzhi9Tvkg9GnJ8JfA
(Famerenana amin'ny antsipirihany an'i Mihintale miaraka amina sary sy sary marobe - Eto)
An-jatony tapitrisa taona lasa izay, Hindustan, Africa, Antartika, ary Aostralia dia kontinanta iray izay nantsoin'ny mpahay siansa hoe Gondwana. Voasarona anaty ala mikitroka i Gondwana.
Ny iray amin'ireo sombin-tany amin'ity ala ity izay mbola velona mandraka androany dia ny Ala Sinharaja, izay any atsimon'i Sri Lanka. Ny toetrandro eo an-toerana dia azo antsoina hoe tena hafahafa.
Ny etona rivotra eto dia saika foana ny 100%, ny rano mihetsika amin'ny ravina, mihodina avy ao amin'izy ireo amin'ny endrika orana mitohy. Karazam-biby mampinono, vorona ary bibikely maro no mipetraka ao anaty aloky ny ala, izay manana anjara toerana lehibe indrindra ao Sri Lanka. Misy ny voatanisa ao amin'ny Red Red.
Ny ala Sinharaja tamin'ny taona 1988 dia lasa iray amin'ny tranon'ny Lova UNESCO.
Ny fotoana tsara indrindra mitsidika an'i Sinharaja dia ny vanim-potoana maina, izay manomboka amin'ny volana Novambra ary mifarana ny volana martsa. Amin'ity vanim-potoana ity, tsy misy atahorana ny hilatsahan'ny orana, izay mety handatsaka ora maro. Azo atao tsara ny mandeha amin'ny lalan'ny ala, na izany aza dia azo antoka kokoa ny ampiana amin'ny fanampiana avy amin'ny masoivoho fitetezana ary manao boky fitsangatsanganana. Ny faharetan'ny malaza indrindra amin'izy ireo dia ny 3 ka hatramin'ny 4 ora, ary ny làlana dia ahitana ny Kekuna Ella Falls, ny akanim-borona eo an-toerana, ny alàlan'ny hazo goavam-be, ny zavamaniry flycatcher miroborobo, ny fonenan'ireo labozika lehibe indrindra, iguanas ary scolopendras.
Ny fitsangantsanganana lava indrindra sy lafo indrindra amin'ny Sinharaja no fiakarana mankany Sigiriya. Atahorana loza sasany miandry ny mpizahatany eto, satria maro ny biby eo an-toerana, manomboka amin'ny elefanta an-dranomasina ka hatrany anaty leec, no mandrahona ny olona. Mandritra izany fotoana izany, ny elefanta dia tsy dia fahita firy, fa amin'ny kankana mandriaka kosa dia azonao atao na aiza na aiza. Matetika izy ireo no latsaka ao ambadiky ny vozon-tranonjaza, mibontsina amin'ny hoditra.
telefaonina: + 94 75 075 4444
Tondroo amin'ny sarintany, azafady: https://goo.gl/maps/sfwZiFsGcaKK31Jb8
Horton Plateau. Slope "Faran'izao tontolo izao"
Ity dia iray amin'ireo zaridainam-pirenena Sri Lankan. Horton Plateau no misy 32 km miala an'i Nuwara Eliya. Natsangana teto ity trano fitahirizana ity tamin'ny 1969, ary 20 taona taty aoriana dia nahazo ny toeran'ny zaridainam-pirenena izy. Ny faritanin'i Horton dia mahatratra 3 160 ha. Ity dia tany be lemaka sy be renirano ary be dia be feno hazo sy kirihitra.
Horton dia toekarena voajanahary izay manana anjara toerana lehibe ara-tontolo iainana ho toy ny trano fonenana voajanahary ho an'ny zavamaniry sy biby marobe. Ny lembalemba dia rakotra ala ala. Miisa 24 ny karazana biby mampinono, karazana 9 ny repobilika, karazam-borona 87 ary karazana amphibiana. Matetika mandritra ny fitsangatsanganana ianao dia afaka hihaona amin'ny vorona maro be, primata, serfa, lolo sy amphibiana. Saingy tsy azo ialana ny fahafaha-mihaona amin'ireo mpiremby mampidi-doza amin'ny olombelona, ​​satria miaina amin'iny faritra iny amin'ny zaridainam-pirenena izay tsy avelan'ny mpizahatany.
Ankoatry ny fauna samihafa, dia misy tendrombohitra avo toa be an'i Kirigalpotta (2 m) ary Thotupola Kanda (395 m).
Ny tena mahasarika ny valan-javaboarim-pirenena dia ny Horton Plateau miaraka amin'ny hantsam-bato miaraka amin'ny zoro metatra antsoina hoe End of the World.
Tsy maintsy mandoa ny fidirana amin'ny zaridainanao ianao. Tapakila ho an'ny olon-dehibe sy ho an'ny ankizy 12 ka hatramin'ny 2 rupees (700 $ eo ho eo). Ny tapakila ho an'ny ankizy 15 taona dia mitentina $ 6 ($ 11). Ny zaza tsy latsaky ny 1 taona dia omena alàlana maimaim-poana. Fa na izany na tsy izany dia tsy maintsy andoavana ny sarany serivisy fanampiny ny fidirana amin'ny fidirana, izay 800 10 rupee no vidiny. Raha tianao dia afaka mijanona ao amin'ny faritanin'i Horton Park ianao mandritra ny alina (avela), dia miakatra avo 6 heny ny vidiny.
(Bebe kokoa momba ny Horton Plateau National Park sy ny Faran'izao tontolo izao ao Nuwara Eliya)
Ity dia toeram-pitsaboana feno iray manontolo, izay ahitana stupa lehibe, tempoly antitra, tempoly vaovao ary fonenan'ny moanina. Ny tena mahaliana dia ny fanangonana sary hoso-doko taloha, izay voatahiry ao amin'ny efitrano taloha tempoly, santionany amin'ny sary hosodoko mahazatra (voatahiry ao amin'ny tempoly vaovao), sarivongana Buddha iray mampahatsiahy ary sary sokitra hafa. Eo amin'ny sisiny havia amin'ny lapan'ny tempoly dia hazo Bodhi masina.
Isan-taona ny volana Janoary dia misy fetibe natokana ho an'ny fitsidihan'ny Buddha ity toerana ity. Mandritra izany fotoana izany dia misy ny fanamboarana loko maro loko, izay handraisan'ireo mpitendry mozika matihanina, mpanao ody ary mpandihy ary koa ny elefanta.
Ny kompana Kelania Raja Maha Wahira dia 10 km avaratra atsinanan'ny renivohitr'i Sri Lanka. Ho fanampin'ny fiarakaretsaka sy ny fitaterana tsy miankina dia afaka miditra ao amin'ny bus 235 ianao, izay miala any Colombo avy amin'ny gara bus Bastian Mawatha.
(Ny antsipiriany momba an'io tempoly io dia hita eto)
Misy tsangambato ara-tantara ao Polonnaruwa, anaovana fandinihana izay fitsangantsangana tarika. Na izany aza, azonao atao koa ny mandinika azy rehetra ao anatin'ny 2 andro.
Indrindra indrindra, ny tempolin'i Gal Viharay, izay misy ny sary sokitra goavana nataon'ny Bouddha, dia tokony hojerena manokana. Ao amin'ny zaridaina arkeolojia lehibe no misy azy io. Ny fidirana mankany amin'ny sisin'ity kianja ity dia aloa. Ny tapakila iray dia mitentina 3 rupees. Na izany aza, tsy afaka mividy tapakila aloa fotsiny ianao - amidy manokana ao amin'ny tranombak'i Polonnaruwa, ary tsy akaikin'ny valan-javaboary. Tsiahivina fa mifindra manodidina ny faritry ny zaridainan'ny fiara fitaterana manokana fa tsy mandeha an-tongotra, satria tena lehibe. Eto ianao dia afaka mahita tempoly, monasitera, stupa ary ny lapa mpanjaka. Eo ihany koa ny dobo famoronana.
Polonnaruwa no misy 200 km miala any Colombo, atsinanana amin'izany. Avy any an-drenivohitr'i Sri Lankan mankany Polonnaruwa dia mety ho tratran'ny lamasinina mora sy tsy mendrika. Misy sidina 2 aza: ny fiaran-dalamby voalohany vao maraina manomboka any Colombo, tonga any Polonnaruwa amin'ny mitatao vovonana. Ary ny faharoa dia niainga tamin'ny 19 ora, tonga tamin'ny misasakalina. Ny vidin'ny tapakila dia 185-600 rupees.
Io zaridaina io dia faritany faha-6 lehibe indrindra eo amin'ireo zaridainam-pirenena 17 ao amin'ny firenena. Manodidina ny 200 km eo ho eo no misy any Colombo. Nandritra ny 50 taona nijoroany, Udawalawe dia nanjary tsy vitan'ny hoe mahasarika mahaliana, fa trano fonenan'ny biby marobe ihany koa.
Eto dia misy elefanta ahitana mponina, izay manodidina ny 600 eo ho eo. Matetika izy ireo dia mandeha an-jaridaina ao anaty vondrona, izay samy manana 8 ka hatramin'ny 10 vavy miaraka amin'ny cubs. Mbola ao Udavalava dia misy ombidia, sambur ary mpitsikilo diera, amboadia, bibidia, amboakely, mongoose, hares, leopard, bison, voay, gidro, amphibiana (karazana 12), biby fiompy (karazana 33), lolo. Raha ny vorona kosa dia efa misy karazana 210 amin'izy ireo, anisan'izany ny herons mpanjaka sy indiana ary volo, ny pelikanina voanjo, katsentsitra, ala sy fotsy antitra, bibilava-vorona, ibis, voromahery sy ny maro hafa. et al.
Tiesh Jewelry Museum nataon'i Lakmini Jewelry
Ity tranom-bakoka ity dia misy ao amin'i Kandy. Ahitana toeram-pivarotana firavaka sy atrikasa ihany koa ilay tranombarotra. Ao amin'ny làlana Peradeniya no misy azy.
Misy mpitari-dalana miandry ny mpitsidika eo am-pidirana. Voalohany, afaka mijery sarimihetsika momba ny mombamomba ny teknolojia eo an-toerana ianao amin'ny fitrandrahana vato sarobidy. Avy eo ny vahiny dia mankao amin'ny efitrano, ny atiny izay miraikitra ho toy ny akana amin'ny fanesorana ireo vato ireo. Eto, ny torolàlana dia hilaza aminao bebe kokoa momba ny fomba namoronana ireo vanja ary mampiseho ny fitaovana nampiasain'ny mpitrandraka: karazom-bidy, fitaovana isan-karazany entina, kitapo hanasana ny tany.
Ny fandroahana vato dia misy ny fampirantiana mined tsy ao Sri Lanka ihany, fa ankoatr'izay. Indrindra indrindra, misy amethysts avy amin'ny Urals sy toerana hafa.
Ao amin'ilay atrikasa firavaka dia afaka mahita ny milina misy vato ianao. Miasa eto ireo mpanangom-pahefana. Samy manana ny latabany avokoa ny tsirairay. Afaka manatona akaiky sy mijery ny fizotran'ny asa ny mpitsidika.
Ny fidirana amin'ny tranombakoka dia maimaim-poana. Misokatra isan'andro manomboka amin'ny 8 ka hatramin'ny 18.
Izy ity dia tanàna iray mahafinaritra izay hita any amin'ireo havoana any Sri Lanka (Uva County), miaraka amin'ny toetrandro sy toetrandro azo antoka. Ny eo akaikiny dia misy tampoka toa an'i Ella Rock sy ny Peak of Small Adam. Rehefa mitaingina azy ireo ianao dia afaka mahaliana faritra mahafinaritra. Ella sy ny manodidina dia manintona mpizahatany miaraka amina riandrano, fambolena dite, trano kely (ohatra, ny tempolin'i Dova miaraka amin'ny sary Buddha 4 metatra ho an'ny vonjy taitra), spa iray eo an-toerana, fisafidianana tranom-pifandraisana isan-karazany amin'ny vidiny mora sy sakafo matsiro. 5 km miala an'io tanàna io no misy renirano Sri Lankan lehibe indrindra - Ravana.
Io no riandrano farany avo indrindra any Sri Lanka. Ny haavon'ny haavony dia 263 m. Any amin'ny Horton Plains National Park no misy azy ary voahodidin'ny ala evergreen tropikaly. Akaiky eo no lalana Kalupahana-Ohiya. Kalupahana (tanàna akaiky indrindra) dia mety ho tratry ny fiara ao anaty 40 minitra. Mizara roa renirano io riandrano io.
Any akaikin'ny tanànan'i Vellawaya sy Cosland. Io no laharana faha-2 eo amin'ireo riandrano Sri Lankan (220 m). Voky ny renirano Punagala Izy. Lalana miorina, nefa be dia be no mankany Diyalum. Cosland dia 6 km miala ny riandrano ary 17 mipaka hatrany Vellawaya.
Ity riandrano ity dia azo ampifandraisina amin'ny kanto indrindra amin'ny nosy. Araka ny angano, mpitondra zazavavy iray Sinhala no nifankatia tamina zazavavy kely iray, saingy nanjary fantatry ny olom-peheziny ary nahatezitra azy ireo. Noho izany, nanapa-kevitra ny hihazakazaka ho any an-tampon'ny tendrombohitra ny olona tia. Ny mpitondra no niakatra voalohany, ary ny olom-boafidiny dia nanaraka azy, fa izy kosa tafintohina, nianjera ary maty. Ary ny ranomaso natsipin'ny mpanjaka Sinhala tao aoriany dia nivadika ho renirano Diyalum.
125 m ny haavony ary 3 m ny halaliny. Eo akaikin'ny tanànan'i Ittitampala no misy azy. Azonao atao ny manatona azy amin'ny fomba roa - amin'ny alalan'ny Migahakivulu, na amin'ny alalan'ny Passara.
Manomboka ao Badull ny lalana mankany Migahakivul, mandalo ny tanànan'i Migahakivul eny an-dalana. Meegahakivula - Pitamaruwa. Amin'ny alàlan'ny fiara dia azo resena amin'ny 45 minitra eo ho eo. Ny làlana faharoa dia mandeha amin'ny làlan'i Passara amin'ny lalambe Madolsima - Kuruvigolla - Pitamaruwa ary lava kokoa - afaka tonga amin'ny alàlan'ny fiara any amin'ny 1,5 ora.
Araka ny angano, ny mpitondra Sinhala iray antsoina hoe Valagamba dia niafina tamin'ny fahavalo tao anaty lava-bato iray teo am-pototr'i Dun Waterfall. Na dia nandritra ny fotoana nanjakan'ny Mpanjaka Sinhala iray - Rajasinghe dia rakotra hazo Mee maro be ihany koa ny amoron'ity riandrano ity. Ireo mpandefa mpitondra dia nampiasa ny savohony mba hanaovana zana-tsipìka.
Mirefy 101 m ny haavony. Ny anarany ao Sinhalese dia mandika mafy toy ny "fametrahana vato sarobidy". Navaratna no anarany faharoa an'i Ratna. Io no riandrano farany avo indrindra izay rehetra ao amin'ny faritr'i Kandy. Taorian'ny nandaozany ny tanànan'i Kandy dia mety ho tonga ao Ratna ao anatin'ny 2 ora amin'ny fiara amin'ny fiara, ary mizotra amin'ny lalambe A-26.
Araka ny angano, ny halalin'ny riandrano iray dia niafina 7 siny feno vato firavaka. Amin'ireny dia 5 no hita rehefa mandeha ny fotoana. Na izany aza, miezaka ny hahita ireo sambo 2 sisa tavela tao anaty riandrano iray.